Saldhigga Boliiska Dayniile oo dib u dhis ay ku sameeyeen Jabaan iyo AMISOM – XOGMAAL.COM
Saldhigga Boliiska Dayniile oo dib u dhis ay ku sameeyeen Jabaan iyo AMISOM
Mss Christine Alalo Taliyaha Ciidanka Boliiska AMISOM oo munaasabaddii lagu wareejinayay Saldhiggan ka hadashay ayaa sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayaan tayaynta kaabayaasha iyo dhismaha awoodda Ciidanka Booliska.
Hogaanka AMISOM ayaa Saraakiisha Boliiska Gobolka Banaadir ku wareejiyay Saldhigga Boliiska Deyniile oo dib dayactir ay ku samaysay Dowladda Jaban oo kaashanaysa waaxda arrimaha Bulshada ee Ciidanka Midowga Afrika AMISOM.
Waxeyna intaasi ku dartay AMISOM ka go’an tahay inay tababarto oo ay qalabeyso Cidamada Boliiska si ay u helaan xirfado lagama maarmaanka u ah howshoosa.
Waxaa sidoo kale lagu soo kordhiyay Saldhiggan dib u dayactirka lagu sameeyay qaybo cusub iyadoona lagu xiray leyrarka ku shaqeeya Cad-ceedda.
Dhinaca kale waxaa Ciidankana loo qaybiyay 3,000 oo Buug Gacmeed ah, si ay ugu adeegsadaan diiwaan gelinta dhacdooyinka, sida ay sheegtay Mss, Alalo Taliyaha Ciidanka Boliiska AMISOM.
Ms, Zakiya Hussein Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ugu mahad celisay AMISOM dedaalkii udub dhexaad u ahaa howshan ee ay ku bixisay dib u dayactirka Saldhiggan, iyo caawinta Ciidanka Booliska.
Dhawaan ayaa degmadaasi Deyniile loo magacaabay Guddoomiye cusub iyadoo ay muuqato la dar dar galinayo howlaha degmadaasi.
Sawirro:- Askari dhac geystay oo ay xukuntay Maxkamadda ciidamada
Warbixin iyo Muuqaal:-Ciyaar ka dhacday Masraxa T-Mobile ee Las Vegas, Tani Guul ka weyn!